“Warka Maxamuud Haashi Waxa Uu Ahaa Wax Lagu Qoslo…..” Aqoonyahan Maxamed Haaruun | Mandheera News
Shalay ayaa dhegaystay Maxamuud Xaashi muxaadaradii uu jeediyay. Sidoo kale, waxa aan isna dhegaystay Saleebaan Bukhaari, oo sida warkiisa ka muuqatay, Muuse Biixi matalaaya, amaba isu dhigaaya in uu matalo, oo u jawaabaaya ninka hore. In ka badan 30 daqiiqadood oo dood, calaacal, wacdi iyo hanjabaad ah buu M. Xaashi mariyay. Beryahan wakhtigaas oo kale iyo wax u dhow toona ma gelinin siyaasi Soomaaliyeed warkiisa, amaba aan idhaahdo siyaasi is mood, ilayn siyaasaddu sidaas Maxamuud iyo qayrkii u fahmeen ma ahee.
Runta hadii aan laga leexleexan, Warka Maxamuud wax lagu qoslo ayuu ahaa, waana ku qoslay. Doodda odayga oo dhami waxa ay ahayd ka cabasho daacad darro, balan-fur iyo sharci ku tumasho. Maxamuud wuu ogyahay in degmada waxa lagu hayaa ba intaas uun yahay, oo weliba uu isagu ka mid yahay inta waxaas ku dhaqantay ee ku maydhatay. Sidaas darted buu warkiisu u ahaa mid lagu qoslo, waana ku qoslay. Muuse ma aanu is aqoonin oo hadda ayaa aan baranayaa yaa ka siisanaaya? Xeerar xisbi iyo mid waddan toona lama xeerinin, dookh nin oo guracan uun baana loo adeegsanayaa awoodihii dawladnimada, sidaasi na waa si xun yaa ka siisanaaya? Hadii loo badheedhay in nidaamka dawliga ah la kufsado, oo nin waliba maalinta uu hayo uu sida uGu xun ee uGu qaawan qalaylka uGu dubto, oo Maxamuud na aan ogahay in uu taas ka dheregsanyahay, oo musharaxnimadii Muuse ba guracaas lagu meel mariyay, oo laftiisu uu ka shaqeeyay, maxaa manta ka calaacaliyay?
Igu dheh sidan – waxa ka calaacaliyay ninkii iyo kooxdii ay wax wada qaseen, ee uu sugaayay in ay markiisa u miisaan ayaa albaabada ka xidhay, wixii la isku ogaa na u xeerin waayay. Oo hadii Meesha ba waxa lagu hayay uu ahaa budhcadnimo shaadh dawladeed loo geliyay, wuu ogyahay in aan cabasho waxba u keenayn ee maxaa odayga kelifay? Laakiin hadii uu qiray in ay awooddii dawladnimo ku muquniyeen mucaaridkii xiligii doorashadii 2017, oo suugaan na ku dhaabadeeyay in ay gaf ahayd sidii laga yeelay raggii uu sheegay in tiirka la taagay, saw uGu yaraan run iyo xaq Kuma addimin maxaa loogu qoslayaa? Miyaanu garawshiiyo istaahilin? Ma istaahilo haba yaraatee, sababta oo ah isna tiirkii uun baa la taagay, hadii ay damqayso ninkii uu u godoboobay in uu tiirka taagay na, odayga iska raali ahaw ha lagu yidhaahdo.